TTSweet: အုန်းထမင်း ဇာတ်လမ်း ...
Posted by T T Sweet at 2:06 PM
ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ September 20, 2010 at 3:18 PM
ကြိုက်တယ်... အုန်းထမင်း... စားဖို့အဖော်မရှိရင် ပူးတေကို နောက်တခါခေါ်လိုက်လေ... လာစားမယ်... :)
Vista September 20, 2010 at 3:51 PM
တီဆွိ ကျနော့်စိတ်ကိုသိနေတာလားမသိဘူး အုန်းထမင်းစားချင်လို့ ချက်နည်းဘယ်နားက ယူရမလည်းတွေးနေတာ ..အတော်ပဲ
မြူးမြူး September 20, 2010 at 3:53 PM
ဒီလိုမှန်းသိ လာကူစားပါတယ်.. စောစောကပြောရောပေါ့ မမဆွိရယ်.. အုန်းထမင်းဆို အရမ်းကြိုက်ပဲ..
ဖိုးတုတ် September 20, 2010 at 4:05 PM
ကျေးဇူးပဲဗျို့၊ ချက်စားကြည့်ဦးမယ် ၊ ဆီဘယ်လောက်ထည့်ရမှာလဲ ဒံပေါက်ချက်နည်းအရင်ကပို.စ်မှာမတင်ဖူးသေးရင် ဒံပေါက်ချက်နည်းကိုတင်ပါဦးဗျို.
တကယ့်ကို “မှတ်သားသွားပါတယ်။ နာယူသွားပါတယ်”
T T Sweet September 20, 2010 at 4:16 PM
ဆီစားပွဲဇွန်းနဲ့ ၆ဇွန်းလောက် ထည့်ပါတယ်။ ဆီများများ ကြိုက်တတ်ရင် ပိုထည့်ပါ။ (မဆွိတီချက်တာ ဆီသိပ်မများပါ။ )
အပေါ်မှာ မေ့သွားလို့ ခုပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဆန် ၃ခွက်စာ အတွက်ပါ။
ဖိုးတုတ် September 20, 2010 at 4:55 PM
ကျေးဇူးပါ ၊ ကျွန်တော်က အုန်းထမင်းကို အိမ်မှာချက် ၊ ချဉ်ပေါင်ကျော်ကို ပင်နစူလာက၀ယ် ၊ ကြက်သားကိုကုလားဆိုင်က ၀ယ်ပြီးတော့မှ အမပို.စ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံနဲ.နည်းနည်းတူပြီး စားလို.ကောင်းမယ်ထင်တယ် ၊ ချဉ်ပေါင်ကျော်ချက်ရတာ တယ်လက်ဝင်တာပဲ ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို စင်အောင်တော်တော်ဆေးရတယ် ၊ ပင်နာစူလာမှာပဲ အကုန်ဝယ်စားလိုက်တာကမှအေးရော ကျွန်တော် ဟင်းချက်တယ် ဆိုတာက အပျော် နဲ. သန်.သန်.ရှင်းရှင်း စားရလို.ပါ ကျန်းမာရေးနဲ.လည်းညီညွတ်တယ် ၊ ၀ါသနာပါရင်ပေါ့လေ stress ကိုတကယ်လျော့စေပါတယ်
စန္ဒကူး September 20, 2010 at 5:26 PM
ကူးဆိုရင်အုန်းသီးခွဲအရမ်းကျွမ်းတာ.. ငယ်ငယ်ကတည်းက ခွဲခဲ့တာ
ကျေးဇူးဘဲ..ဒီအပတ်အုန်းထမင်းချက်ပီး potluck ယူသွားမယ်.း)))
ဆီ စားပွဲဇွန်း ၆ဇွန်းခန့်နဲ့ ကြက်သွန်တစ်ဝက်ကိုမွှေးနေအောင် ကျွတ်သည်အထိသတ်ပြီး၊ တစ်ဝက်ကို မနွမ်းတနွမ်းထားပါတယ်။......
ပြီးတော. ၂မျိုးလုံး ထမင်းချက်တဲ.ထဲ ထည်.လိုက်လား
T T Sweet September 20, 2010 at 11:40 PM
ဆီသတ်တာမွှေးအောင် တစ်ဝက်ကိုကျွတ်အောင်သတ်ပြီး ကျန်တာတွေကို ထမင်းထဲ ချိုအောင် ဆီသတ်လို့ကျက်ခါနီးမှ နွမ်းအောင်ထည့်ပါတယ်။ အစိမ်းအတိုင်းထည့်ရင်လဲ ကြက်သွန်က မအိပဲ မာနေမှာစိုးလို့ပါ။ ပြီးတော့ အားလုံးကို ထမင်းချက်တဲ့အထဲထည့်ပါတယ်။
သက်ဝေ September 20, 2010 at 11:59 PM
နေ့ခင်းက တခါ လာဖတ်ပြီးပြီ... သဘောကျပြီး ပြန်သွားတယ်...
ပြီးတော့ မဆွီတီရဲ့သူငယ်ချင်းပီပီ စိတ်ကြီးတယ်... ခုနကပဲ NTUC ကနေ အုန်းနို့အထုပ်ဝယ်လာခဲ့တယ်... ဘာရမလဲ...
အဲ... သွေးတိုးမှာ ကြောက်တဲ့သူကိုတော့ မကျွေးပဲထားရုံပေါ့...
PAUK September 21, 2010 at 12:24 AM
အုန်းထမင်း မချက်တတ်လို့အတော်ပဲ မဆွီတီရေ..။
Shinlay September 21, 2010 at 4:17 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 21, 2010 at 6:13 AM
mgchaint September 21, 2010 at 6:18 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ အသက်ကိုဥာဏ်စောင့်တယ်တဲ့။ အစားတစ်လုပ်နဲ့ တစ်ပတ်လောက် မခံစားနိုင်ဘူး။ ဆွိက အုန်းနို့ချက်ထားတာကို နည်းနည်းသွားမြည်းလိုက်တာ အဲဒီညက သွေးတွေတက်ပါရော။.... စိတ်လျော့ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
Moe Cho Thinn September 22, 2010 at 11:08 AM
မတားနဲ့တော့ဗျို့.. မနက်ဖန်ပဲ ချက်တော့မယ်။ :))
ခင်ဗျားတို့လို သူများနိုင်ငံသွား ကျွှန်ခံနေရတာပျော်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အမိမြန်မာပြည် ၀မ်းရည်စပ်တယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ကို မြန်မာပြည်ကြီးကမွေးပေးခဲ့တာပါ စလုံးမှ အထင်ကြီးသလိုနဲ့ ခင်ဗျားတို့မရှက်ကြဘူးလားဗျာ
T T Sweet September 22, 2010 at 2:43 PM
စလုံးအထင်ကြီးတယ်လို့ တစ်လုံးမှလဲမပါရပါလား အပေါ်က အနောနိမတ်စ်ရယ်။ ခုချိန်ထိ အခွန်ဆောင်ပြီး မြန်မာနိူင်ငံသားတစ်ယောက်အဖြစ် နေနေဆဲပဲ။
စလုံးမှာ ကျွန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့စကားကလဲ မှားပါတယ်။ ဒီမှာ လုပ်ခအပြည့်အ၀၊ ခံစားခွင့်အပြည့်အ၀နဲ့ လူတန်းစေ့စေ့နေပြီး လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ ကျွန်မတို့ဒီမှာဒီလိုရှာ ဒီလိုနေနိူင်နေလို့ ဟိုမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ၂ဖက်မိသားစုတွေလဲ ၀မ်းဝနေကြတာ။ အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။
15 ယောက်စာဆို ဘယ်လောက်ချက်ရမလဲဟင်တီဆွိ။
T T Sweet January 12, 2012 at 2:33 PM
ဆန်လူတစ်ယောက် တစ်ခွက်ခွဲနှုံးနဲ့ အုန်းနို့ 400ml ၂ဗူးစာလောက်ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
အုန်းထမင်းလည်း ချက်ပြီးပြီ...ကောင်းတာပဲ.....အန်တီကြောင့် ..သမီးလည်း မြန်မာစာတွေလုပ်တတ်လာခဲ့ပြီ... ကျေးဇူးပါအန်တီ.....